Cadeyn: Itoobiya oo Somaliland usoo dirtay dhambaal ku aadan xuska 18ka May
Ayada oo ay maanta ku aadantahay 26 guuradii kasoo wareegatay markii ay Somaliland ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale sanadkastana 18ka May ay u asteysatay dabaaldega iyo xuska maalintaas ayaa waxaa dhambaal ku aadan maalintaas maamulka Somaliland usoo dirtay dowlada Itoobiya.
Warqad uu ku saxiixanyahay qunsulka guud ee dowlada Itoobiya u fadhiya magaalada Hargeysa Gen. Berha Tesfaye ayaa waxa uu qunsulku ugu hambalyeeyay shacabka iyo maamulka Somaliland maalinta 18 May isaga oo u rajeeyay horumar iyo baraare.
”Aniga oo ku hadlayo magaca dowlada Itoobiya iyo midkeygaba waxaan ugu hambalyenayaa jamhuuriyadda Somaliland iyo shacabkeeda maalinta qaranka 18 May” ayaa lagu yiri warqada qunsulka.
Dowlada Itoobiya ayaa waxa ay dhowaan sidoo kale siisay dhisme cusub safaarada Somaliland ee magaalada Addis ababa taasoo u dhiganto aqoonsi dadban, waxa ayna arimahani ka hor imaanayaan hadal dhowaan uu raisalwasaaraha Itoobiya ka sheegay shir jaraa’id oo ay magaalada Addis ababa kuwada qabteen madaxweynahha Soomaaliya isaga oo sheegay inay dowlada Itoobiya qadarinayso madaxbanaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya ayaa ku dadaalayso mijixaabinta dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhalato iyo weliba kala qo qobida dadyowga Soomaaliyeed.